Igbo, Romans, Lesson 018 -- The Law, or the Conscience Condemns Man (Romans 2:12-16) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 018 (The Law, or the Conscience Condemns Man)
b) Iwu, ma obu ako na uche na-ama mmadu ikpe (Ndi Rom 2:12-16)
NDI ROM 2:12-16
12 N’ihi na ndị niile mehiere n’enweghị iwu ga-alakwa n’iyi n’enweghị iwu, ọ bụrụkwa na ndị niile mehiere n’iwu ka a ga-eji kpee ha ikpe 13 (n’ihi na ọ bụghị ndị na-anụ iwu ahụ ziri ezi n’anya Chineke, kama ọ bụ ndị na-eme ya.) iwu bu onye ezi omume: 14 N’ihi na mb ,e ndi mba ọzọ, ndi n notnweghi iwu, n’ewe site n’ime uwa me ihe nile nke iwu, ndia bu ezie n’enyeghi iwu, ha bu ndi nyere onwe ha iwu, 15 ndi n’egosi oru nke iwu. e dere n’ime obi ha, akọ na uche ha na-agbakwa àmà, na n’etiti onwe ha echiche ha na-ebo ebubo ma ọ bụ na-agbagọkwa ha ọzọ) 16 n’ụbọchị Chineke ga-ekpebi ihe nzuzo nke mmadụ site n’aka Jizọs Kraịst, dị ka ozi ọma m si dị.
Ka abụọ dị na Rom mebere ọgbakọ abụọ a: Ndị Kraịst sitere na ndị Juu, na ndị kwere ekwe si na mpaghara Grik na Rom. Nke mbu mara ihe banyere nkwa na iwu, ma debe omenala ha dika agba ochie; ebe ndi Kristi nke ndi mba ọzọ amaghi iwu o bula maka ndu ha, kama ha jere ije n'ike nke Mo Kraist.
Pol mere ka ndi Kraist nke sitere na ndi Ju mara na Chineke gha ata ha ikpe dika iwu ochie si di, nke bu ihe nlere idi nso ya. Aringnụ okwu Chineke anaghị azọpụta, ma echiche ime mmụọ na ogologo ekpere ezughi, n'ihi na Chukwu chọrọ nrube isi nke obi na nke ndụ. Ọ chọrọ ka okwu ya zọọ anyị n’ime, ka ndụ anyị gbanwee kwa n’okwu ya. A ga-ama onye Juu ahụ ikpe n'ihi njehie ọ bụla o mehiere megide Iwu ahụ, n'ihi na a na-ahụta mmebi iwu niile dị ka iro nke Chineke.
Mgbe Pọl dere eziokwu ndị a, ọ nụrụ na mmụọ ya, arụmụka nke ndị Kraịst nke ndị Juu, onye sịrị: “Anyị enweghị iwu, anyị amataghị Iwu Iri ahụ; mgbe ah olee otú Chineke g’eji meso anyị ubọchị Ikpe? Anyị esiteghị ikpe ”.
Ọ zaziri ha n’ezoghị ọnụ na ezi omume nke Chineke adịghị agbanwe agbanwe, ọbụlagodi na ọ na-ama ndị na-eleghara Iwu ahụ anya, ndị na-anụbeghị Iwu na nkwa, ma ọ bụ na-ahụtaghị ịhụnanya na ịdị nsọ nke Chineke; n'ihi na Onye Okike tinyere nwoke ọ bụla nlezianya, nlezianya, njikwa, ịdọ aka ná ntị, ịba mba, na ịba akọnuche. Onye dọrọ aka na ntị a nwere ike gbachi nkịtị mgbe ụfọdụ dị ka à ga-asị na ọnwere anwụrụ. Mana ọ na - egosiputa ihe ọhụrụ iji gosi gị mmejọ gị. Ọgụ ga-esikwa n'ime gị pụta. Ndi fọduru a n’oyiyi nke Chineke n’ime gi apughi imebi gi oge niile. Akọ na uche gị na-ama gị ikpe. I gaghi-enwe ike izu ike belughi amara Chineke. Ọ bụ ya mere ọtụtụ mmadụ ji enwe mwute na ụjọ, n'ihi na ha bi n'iche na akọ na uche ha, ha anaghị ekwupụta njehie ha, n'agbanyeghị na akọ na uche ha na-ele ọrụ ha ma na-akọcha ha. Gi na-ekele Chineke maka akọ na uche gị, iwu omume nke arụpụtara n’ime gị? Zụlite akọ na uche gị n’ime Ozi-ọma, ma tiye ya n’echiche nke ịhụnanya nke Chineke ka ọ nwee ike dọọ gị aka na ịkwụzi aka ma duzie gị dịka ntuzi aka nke Chineke si dị, ị nwere ike tozuo oke ma kwado maka ezi ọrụ ọ bụla. Mgbe ahụ ị gaghị adaba na ikpe ikpe ikpe ikpeazụ, n'ihi na ibi ndụ kwekọrọ n'olu Chineke n'ime obi gị.
Ma ọ buru na ibanyeghi nke oma n’ime okwu nke Kraist, ewepu-kwa-la onwe-gi na mkpesa nke akọ na uche gi, kama n’ịnọgide n’uche gi, ma n’ezipu onwe gi n’onwe gi, akọ na uche gi g’ebili imegide gi n’ụbọchị ikpe-azu. Ọ g’eme ka Chineke guzosie ike, ma taa gị ikpe. Nweghị ụzọ ọzọ ị ga-esi mee ka ụjọ gị kama ịbanye n’ozi ọma, nke na-egosi gị na Onyeikpe gị bụ Onwe ya, Onye nzọpụta gị. Yabụ, bịakwute Kraịst ozugbo, ị ga-achọkwa izu ike maka mkpụrụ obi gị.
Imaara na ikpe ikpeazụ nke Chineke ka aga etinye n’aka Jizọs Kraịst? Imaara na aha Onyeikpe a abụghị naanị “Kraist” kamakwa “Jizọs”? Ihe dị iche n’etiti aha ndị a bụ na “Jizọs” bụ aha nke ya, ebe “Kraist” bụ nkọwa nke ọfịs ya. Jizọs bụ Onye E Tere Mmanụ, onye juputara n’onyinye na njiri mara nke Chineke, onye nwere ikike kachasị elu na onye nwere ikike na ikpe na nzọpụta.
Ya mere, onye ozi ahu puru ikwu na Chineke ghapu ihe nzuzo ya nile dika uwa si di nke ozi oma Pọl meputara banyere Jizos. O di nkpa ka anyi mata ihe ekpughere n’ozi oma nke Pol, dika edeputara ya n’akwukwo ozi ya nye ndi Rom, banyere ubochi ikpe.
EKPERE: O Chineke di nso, Gi onwe-gi maram karịa ka m matara onwe m. Egosiwo ọrụ m niile n'ihu gị. Ekwupụtara m mmehie m, rịọkwa m ka ị kpughere m njehie m nile zoro ezo, ka m wee mee ka ha bịa n’iru nwa gị, tupu ọbịbịa nke ụbọchị ahụ dị egwu. Gbaghara m ma ọ bụrụ na erubeghị m isi akọnuche m ozugbo, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na akpacharaghị m anya olu gị. Nye m mkpebi siri ike na imezu ihe enyere gị n'iwu.
Kedụ ka Chineke ga-emeso ndị mba ọzọ n ’ụbọchị ikpe?
Page last modified on January 25, 2021, at 03:31 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)